तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अचानक घर बोलाएर किन गरियो हत्या ? – Butwal 24 News
तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अचानक घर बोलाएर किन गरियो हत्या ?
September 9, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on तीज मान्न माइती गएकी सीतालाई अचानक घर बोलाएर किन गरियो हत्या ?
बुटवल । हिन्दू नारीहरुका सामू तीजको रमझम भित्रिएको बेला रुपन्देहीमा एउटी चेलीको निकै रहस्यमय मृत्यु घटना बाहिर आएको छ । दुई वर्ष अघिमात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकी रुपन्देही तिलोत्तमा-८ मणिग्रामस्थित ४ नम्बर टोल माइती घर भएकी २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा रहस्यमय मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त नगरपालिका-५ घर भएका ४३ बर्षीय टीका पौड्यालकी श्रीमती सीताको आफ्नै घरको कोठामा रहस्यमय मृत्यु भएको घटना मंगलबार माइतीजनले पत्रकार सम्मेलन गरि बाहिर ल्याएका हुन् ।
भदौ ६ गते तीजसमेत मानेर घर फर्किने गरि माइतीमा आएकी सीतालाई श्रीमान टीकाले भदौ १९ गते दिउँसो घरमा भतिजको बर्थडे छ ‘तिमी घर जाउ म पनि साँझ घर आउँछु’ भनेर पाल्पाबाट फोन गरे ।
उनले श्रीमानको बचन हार्न नसकी उनी घर फर्किइन् । उनी त्यस दिन दिउँसो घरबाट हिँडेका थिए । माइतीले उनी घरबाट हिँडेदेखि राति ९ बजेसम्म माइतीले फोन गरिरहे तर उनको फोन उठ्दै उठेन । अर्काे दिन एक्कासी अर्को माइतीलाई काम छ भनेर टीकाको घरबाट बोलाइयो । माइतीजन त्यहाँ पुग्दा मुहार रक्ताम्मे अवस्थामा सीताको मृत्यु भइसकेको थियो । उक्त दृश्य देख्न साथ त्यहाँ पुगेका सीताका बाबु-आमा बेहोस भई ढले ।
प्रत्यक्षदर्शी माइतीजनका अनुसार उनी आफ्नै घरको कोठामा मुखबाट रगत बगेको, गलामा चुङ्गीले कसिएको र भुँईमा लडेको अवस्थामा भदौ २० गते विहान मृत फेला परेकी थिईन् । मृतक सीताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारीले छोरीको हत्या नै भएको भनि बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएको तर प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन नमानेपछि त्यसको विरोधमा सयौं माईतीजनले आज बुधबार दिउँसो त्यस प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
घटनाक्रम यस्तो छ :
तीज मान्न माइती आएकी सीता आमा–बाबुलगायतका माइतीजनसँग तीजमा के के चिजहरु किनमेल गर्ने भन्ने बारे चर्चा पनि चल्दै थियो । त्यही क्रममा एक्कासी उनका श्रीमान टीकाको फोन आयो । ‘ल आज साँझ तिमी घर आऊ दिदीको छोराको बर्थडे मनाउनु छ’ भन्दै टीकाले फोनमा भने ।
टीकाले पाल्पा तानसेनको होलाङदी जाने बाटोमा ‘दि दरबार कटेज एण्ड रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले त्यहीँबाट श्रीमतीलाई तिमी घर जाँदै गर्नु म साँझ आउँछु भनेर घर पठाएका थिए । त्यसपछि उनी भदौ १९ गते दिउँसो करिब २ बजेको समयमा माइत बाट घर हिडेकी थिइन् । माइतीजनले भने सीताको हत्या योजनाबद्ध गरिएको भन्दै न्यायको खोजीमा छ ।
मामा आकाश भन्छन् :-
त्यसैदिन साँझ करिव साढे ६ बजेको समयमा सिताका श्रीमान ससुराली आउँछन् र मेरो घरमा आई तपाईकी छोरी अब वितारा पर्ने भई । मैले त आनन्दको जीन्दगी जिउछु भनी धम्कीपूर्ण कुरा गरी अरु केही नबोली अगाडीको ढोका जोडले लगाउँदै हुँईकिदै त्यहाँबाट हिँडे हुन् । मेरी भान्जीको घर र मेरो पसल सँग–सगै छ । उनले मदिरा पिएको आभास हुन्थ्यो । त्यसलगत्तै मैले पटक पटक भान्जीलाई फोन हाने । साँझ ७ बजे देखि साँझ ९ बजे सम्म भान्जीलाई फोन हान्दा पनि फोन उठेन ।
अर्को दिन विहान ५ बजेर २५ मिनेट जाँदा उनका श्रीमानको ८ सेकेन्ड मात्रै मिसकल आयो । हिजो जाँड रक्सी पिएर केहीँ बोलिकी भनेर एस्क्युज गर्न होला भनेर मैले कल ब्याग गरिन । त्यसलगत्तै भाईलाई फोन आएछ । उनले मेरो घर आउनुस् भन्नुको सट्टा मेरो घरमा जानु भनेछन् । के के भयो र भनेर सोध्दा केही भएको छैन एउटा काम छ भनेछन् । सासु ससुरालाई फोन गरेर पनि मेरो घर छिट्टै जानुस् भने छन् ।
कारण सोध्दा केहीँ भनेर मात्र आइहाल्नु पर्ने भयो । अति जरुरी काम पर्यो भने छन् । त्यसपछि मृतककी आमा अर्थात् मेरो दिदी पुनम भण्डारी, भाईहरु पदम पोखरेल र लक्ष्मण पोखरेल पहिला त्यस घरमा पुगेछन् । म पछि मात्रै गएको हुँ । उनीहरुले त्यहाँ पुगेर हामीहरुलाई किन हतार हतार बोलाउनु भएको हो ? मेरी छोरी कता छिन् भनि सोध्दा घरमा भएका सासु ससुराले कुनै जवाफै दिएनछन् ।
त्यति बेलासम्म ज्वाँई घरमा थिएनन् । त्यसको करिव २० मिनेट पछि घरमा ज्वाँई बाहिरबाट घरमा आइ तपाईंहरुको छोरीलाई मार्नमा प्रमुख हात यसैको छ भनी उनको दिदी (जो चितवनबाट माइत आएकी थिईन् विष्णु पौडेल) लाई औँला ठड्याउँदै कराउन थाले । त्यसपछि मृतका बाबु–आमा छोरी जीवित छैनन् भन्ने ठानेर बेहोस भई त्यही ढलेछन् ।
साथमा गएका सालाहरु पदम पोखरेल र लक्ष्मण पोखरेलले घरभित्र गई हेर्दा अट्याच कोठाबाट वाथरुममा पस्ने ढोकामाथि काटिएको चुङ्गी झुण्डिइरहेको, सीतालाई भुँईमा घोप्टोपारी सिरानीमा टाउको राखिएको, मृतकको दुवै कोखामा निलडाम रहेको, मुखबाट रगत बगी अनुहारमा लत्पत्तिएको र घाँटीको दायाँ छेउमा गाठो पारिएको चुङ्गीले कसेको अवस्थाम फेला पारेका थिए ।
फातिमा सुमार बिहीबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने, समय भने गोप्य
‘म्याच फिक्सिङ’मा मुछियो ‘सी’ डिभिजन पनि, एन्फा फेरि विवादमा
कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट फेला, अझ बढी सङ्क्रामक रहेको आशंका
August 31, 2021 Butwal 24 News
काखमा शिशु च्यापेर परीक्षा दिँदै सात दिनकी सुत्केरी
August 6, 2021 Butwal 24 News
October 20, 2021 October 20, 2021 Butwal 24 News